Warbixin: Madaxweyne Muuse Biixi oo aan qaabilin safiirka Shiinaha oo rabay inuu la kulmo | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Warbixin: Madaxweyne Muuse Biixi oo aan qaabilin safiirka Shiinaha oo rabay inuu...
Warbixin: Madaxweyne Muuse Biixi oo aan qaabilin safiirka Shiinaha oo rabay inuu la kulmo
Xorriya Online: Safiirka dalka China u fadhiya magaalada Muqdisho danjire Qin Jian oo afartii maalmood ee u dambeeyay ku sugan magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ayaan weli la kulmin madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Danjire Jian, oo hoggaaminaya diblomaasiyiin ka tirsan safaaradiisa Muqdisho ayaa Sabtidii socdaal ku yimid magaalada Hargeysa, si uu dawladda Somaliland ugala hadlo xiriirka cusub ee Somaliland iyo Taiwan dhex maray oo uu safiirku si kulul u cambaareeyay.
Safiiirka China Qin Jian
Hase yeeshee, danjire Jian ayaa afar maalmood oo uu Hargeysa joogay aan weli la kulmin madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, iyada oo sababta uu u yimid safiirka Hargeysa ay aheyd la kulanka madaxweynaha.
Si rasmi ah looma garanayo sababta keentay in safiirku arki kari waayo madaxweyne Biixi, mana lahubo in madaxweynaha iyo safiirka ku ballansan yihiinin ay is arki doonaan, iyo in safiirka ku laaban doono Muqdisho isaga la kulmin madaxweynaha.
wasiir kuxigeenka arrimaha dibadda, Liibaan Yuusuf Gaaxnuug.
Illaa iyo hadda waxaa uu safiirka la kulmay oo kaliya wasiir kuxigeenka arrimaha dibadda, Liibaan Yuusuf Gaaxnuug. Mana jirto cid faahfaahin ka bixisay oo warbaahinta la wadaagtay waxay kawada hadleen.
Ujeedka ugu weyn ee safiirka ayaa ahaa la kulmidda madaxweynaha si uu ugu gudbiyo in China raali ka aheyn, aadna uga xun tahay xiriirka cusub ee u billowdey Somaliland iyo Taiwan.
Dawladda China ayaa si weyn uga hortimid, una cambaaraysay bilowga xiriirka Somaliland iyo Taiwan oo gaadhay heerka ah inay wakiilo is weydaarsadaan. Wakiilka ay Taiwan u soo magacowday Somaliland ayaa ku sugan Hargeysa, iyadoo la filayo in wakiilka ay Somaliland magacowday uu isna dhawaan u ambo baxo Taiwan.
Hargeysa ayaa hadda waxaa kuwada sugan wakiilka ay Taiwan u soo magacawday Somaliland iyo safiirka China u qaabilsan Soomaaliya.
Lama ogo in Somaliland ay xirrirka cusub ay la sameysatay Taiwan oo isbadal ku imaan doono iyo in kale madaama ay dowladda China dooneyso in ay Somaliland ku qanciso in ay ka baxdo heshiiska ay la gashay Taiwan.
Xorriya.com iyo Geeska.net